ဒီရာသီမှာ မထင်မှတ်တဲ့ရလဒ်တွေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပွဲက လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ်
ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အသင်းကြီးနဲ့ အသင်းငယ်တွေကြား ကွာဟချက် ကြီးမားနေပြီလား
13 Nov 2018 . 6:43 PM
ပရီးမီးယားလိဂ်ဆိုတာက တခြားလိဂ်တွေလို မဟုတ်ဘဲ အသင်းတစ်သင်းနဲ့ တစ်သင်းကြား ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်ပြီး မထင်မှတ်တဲ့ ရလဒ်တွေ ထွက်ပေါ်လေ့ရှိလို့ အကြိတ်အနယ်အရှိဆုံး လိဂ်ပြိုင်ပွဲအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတယ်။ ၂၀၁၅-၁၆ ရာသီမှာ လက်စတာလိုအသင်းမျိုးက ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာကို ကြည့်ရင် ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုကို တွေ့နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီနောက်ပိုင်းန်ှစ်တွေမှာ အသင်းကြီးနဲ့ အသင်းငယ်တွေကြားမှာ ကွာဟချက်ကြီးမားလားဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်ရတော့မယ်။
ဒီရာသီ ပိုဆိုးတယ်။ အဆင့်(၇)က စပြီး အဆင့်(၂၀)အသင်းတွေရဲ့ ပေးဂိုးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက သူတို့ သွင်းယူခဲ့တဲ့ ဂိုးအရေအတွက်ထက် ပိုများနေတယ်။ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်က ပွဲစဉ်(၁၂)အထိ ကစားပြီးပါပြီ။ ပွဲစဉ်(၁၂)အပြီး အသင်း(၃)သင်း (မန်စီးတီး၊ လီဗာပူးလ်၊ ချယ်လ်ဆီး) ရှုံးပွဲမရှိတာက ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ်ပါပဲ။ အဆင့်(၄)နေရာက စပါးအသင်းဟာ ဒီရာသီမှာ အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံး ရာသီအစရလဒ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ (၇)ပွဲနိုင်၊ (၃)ပွဲသရေ၊ (၂)ပွဲရှုံးပြီး အဆင့်(၅)နေရာမှာ ရပ်တည်နေတဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ရလဒ်တွေဟာ သမိုင်းတစ်လျှောက် ပွဲစဉ် (၁၂)အပြီး အဆင့်(၅)နေရာရခဲ့တဲ့ အသင်းတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံး ရလဒ်ပါပဲ။
ဒီရာသီမှာ အမှတ်ပေးဇယား ထိပ်ဆုံး(၅)သင်းဟာ အမှတ်ပေးဇယား အောက်ခြေ(၅)သင်းနဲ့ အကြိမ်(၂၀)ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး ပွဲတိုင်းကို အနိုင်ရခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက မန်စီးတီးအသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်စံချိန်တင် ရမှတ်ဖြစ်တဲ့ အမှတ်(၁၀၀)နဲ့ ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့အပြင် ရာသီအစကတည်းက (၂၂)ပွဲဆက်တိုက် ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ဘူး။ ဒါ့အပြင် အဲဒီ ပွဲတွေမှာ (၄)ဂိုးနဲ့အထက် နိုင်ပွဲရခဲ့တာက (၁၃)ပွဲအထိရှိခဲ့တယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းမှာ ထိပ်ဆုံးအသင်းနဲ့ ကျန်တဲ့အသင်းတွေရဲ့ကြားက ကွာဟချက်က ဒီလောက်အထိ တစ်ခါမှ မကြီးမားခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တယ်ဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းကောင်းကို ထိခိုက်စေတဲ့ အချက်ပါပဲ။
၁၉၉၉ တုန်းက ဖလား(၃)လုံး ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး သမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှု ရခဲ့တဲ့ မန်ယူအသင်းတောင် အဲဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အမှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲက (၁၆)ပွဲအထိရှိခဲ့တယ်။ အခုဖြစ်လာတာက ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ Big Six အသင်းအချင်းချင်း ဆုံတွေ့တဲ့ပွဲတွေသာ ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လေ့ရှိပြီး ကျန်တဲ့ပွဲအများစုက အမှတ်လှူတဲ့ပွဲတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဒီရာသီမှာ Big Six အသင်းတွေကို ကျန်တဲ့အသင်းတွေ အနိုင်ရတဲ့ပွဲက လက်ချိုးရေလို့တောင် ရနေပြီ။ ဒီလိုဖြစ်နေတာက ငွေကြေးကြောင့် မဟုတ်တာတော့ အသေအချာပါပဲ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဗာတန်၊ ဖူလ်ဟမ်၊ ၀က်စ်ဟမ်းတို့ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ အသုံးစရိတ်က ပေါင်သန်း(၁၀၀)နဲ့အထက် ရှိခဲ့ပြီး ဒီလို ငွေတွေ သုံးတာတောင် အသင်းကြီးနဲ့ အသင်းငယ်တွေကြား ကွာဟချက် ကြီးမားလာတာက မယုံနိုင်စရာပါ။ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ပရိသတ်တွေ ကြိုက်ကြတယ်ဆိုတာက ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်းကြီးတွေနဲ့ ကျန်တဲ့အသင်းတွေကြား Gap က ပိုကြီးမားလာမယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်တံ့လာတဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်တယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို လက်လွှတ်ရမယ့်အနေအထားလို့ပဲ ဆိုပါရစေ . . .
Photo:ExtraTips.com,Dhaka Tribune,Sports Illustrated,DHL InMotion,Fox Sports,We Ain’t Got No History
ပရီးမီးယားလိဂျမှာ အသငျးကွီးနဲ့ အသငျးငယျတှကွေား ကှာဟခကျြ ကွီးမားနပွေီလား
ပရီးမီးယားလိဂျဆိုတာက တခွားလိဂျတှလေို မဟုတျဘဲ အသငျးတဈသငျးနဲ့ တဈသငျးကွား ပွိုငျဆိုငျမှု ပွငျးထနျပွီး မထငျမှတျတဲ့ ရလဒျတှေ ထှကျပျေါလရှေိ့လို့ အကွိတျအနယျအရှိဆုံး လိဂျပွိုငျပှဲအဖွဈ သတျမှတျခံထားရတယျ။ ၂၀၁၅-၁၆ ရာသီမှာ လကျစတာလိုအသငျးမြိုးက ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဖွဈခဲ့တာကို ကွညျ့ရငျ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ ပွငျးထနျတဲ့ ပွိုငျဆိုငျမှုကို တှနေို့ငျတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီနောကျပိုငျးနျှဈတှမှော အသငျးကွီးနဲ့ အသငျးငယျတှကွေားမှာ ကှာဟခကျြကွီးမားလားဆိုပွီး မေးခှနျးထုတျရတော့မယျ။
ဒီရာသီ ပိုဆိုးတယျ။ အဆငျ့(၇)က စပွီး အဆငျ့(၂၀)အသငျးတှရေဲ့ ပေးဂိုးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက သူတို့ သှငျးယူခဲ့တဲ့ ဂိုးအရအေတှကျထကျ ပိုမြားနတေယျ။ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျက ပှဲစဉျ(၁၂)အထိ ကစားပွီးပါပွီ။ ပှဲစဉျ(၁၂)အပွီး အသငျး(၃)သငျး (မနျစီးတီး၊ လီဗာပူးလျ၊ ခယျြလျဆီး) ရှုံးပှဲမရှိတာက ပရီးမီးယားလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံးအကွိမျပါပဲ။ အဆငျ့(၄)နရောက စပါးအသငျးဟာ ဒီရာသီမှာ အသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ အကောငျးဆုံး ရာသီအစရလဒျတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတယျ။ (၇)ပှဲနိုငျ၊ (၃)ပှဲသရေ၊ (၂)ပှဲရှုံးပွီး အဆငျ့(၅)နရောမှာ ရပျတညျနတေဲ့ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ရလဒျတှဟော သမိုငျးတဈလြှောကျ ပှဲစဉျ (၁၂)အပွီး အဆငျ့(၅)နရောရခဲ့တဲ့ အသငျးတှထေဲမှာ အကောငျးဆုံး ရလဒျပါပဲ။
ဒီရာသီမှာ အမှတျပေးဇယား ထိပျဆုံး(၅)သငျးဟာ အမှတျပေးဇယား အောကျခွေ(၅)သငျးနဲ့ အကွိမျ(၂၀)ဆုံတှခေဲ့ပွီး ပှဲတိုငျးကို အနိုငျရခဲ့တယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီတုနျးက မနျစီးတီးအသငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျစံခြိနျတငျ ရမှတျဖွဈတဲ့ အမှတျ(၁၀၀)နဲ့ ဗိုလျစှဲခဲ့တဲ့အပွငျ ရာသီအစကတညျးက (၂၂)ပှဲဆကျတိုကျ ရှုံးပှဲမရှိခဲ့ဘူး။ ဒါ့အပွငျ အဲဒီ ပှဲတှမှော (၄)ဂိုးနဲ့အထကျ နိုငျပှဲရခဲ့တာက (၁၃)ပှဲအထိရှိခဲ့တယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျသမိုငျးမှာ ထိပျဆုံးအသငျးနဲ့ ကနျြတဲ့အသငျးတှရေဲ့ကွားက ကှာဟခကျြက ဒီလောကျအထိ တဈခါမှ မကွီးမားခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါဟာ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲရဲ့ ပွိုငျဆိုငျမှုပွငျးထနျတယျဆိုတဲ့ မှတျတမျးကောငျးကို ထိခိုကျစတေဲ့ အခကျြပါပဲ။
၁၉၉၉ တုနျးက ဖလား(၃)လုံး ဆှတျခူးခဲ့ပွီး သမိုငျးဝငျအောငျမွငျမှု ရခဲ့တဲ့ မနျယူအသငျးတောငျ အဲဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ အမှတျဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ပှဲက (၁၆)ပှဲအထိရှိခဲ့တယျ။ အခုဖွဈလာတာက ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ Big Six အသငျးအခငျြးခငျြး ဆုံတှတေဲ့ပှဲတှသော ပွိုငျဆိုငျမှုပွငျးထနျလရှေိ့ပွီး ကနျြတဲ့ပှဲအမြားစုက အမှတျလှူတဲ့ပှဲတှေ ဖွဈလာတယျ။ ဒီရာသီမှာ Big Six အသငျးတှကေို ကနျြတဲ့အသငျးတှေ အနိုငျရတဲ့ပှဲက လကျခြိုးရလေို့တောငျ ရနပွေီ။ ဒီလိုဖွဈနတောက ငှကွေေးကွောငျ့ မဟုတျတာတော့ အသအေခြာပါပဲ။
ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အဲဗာတနျ၊ ဖူလျဟမျ၊ ဝကျဈဟမျးတို့ရဲ့ အပွောငျးအရှေ့ အသုံးစရိတျက ပေါငျသနျး(၁၀၀)နဲ့အထကျ ရှိခဲ့ပွီး ဒီလို ငှတှေေ သုံးတာတောငျ အသငျးကွီးနဲ့ အသငျးငယျတှကွေား ကှာဟခကျြ ကွီးမားလာတာက မယုံနိုငျစရာပါ။ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲကို ကမ်ဘာတဈဝှမျးက ပရိသတျတှေ ကွိုကျကွတယျဆိုတာက ပွိုငျဆိုငျမှုပွငျးထနျမှုကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျ အသငျးကွီးတှနေဲ့ ကနျြတဲ့အသငျးတှကွေား Gap က ပိုကွီးမားလာမယျဆိုရငျတော့ နှဈပေါငျးမြားစှာ တညျတံ့လာတဲ့ ပွိုငျဆိုငျမှု ပွငျးထနျတယျဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျကို လကျလှတျရမယျ့အနအေထားလို့ပဲ ဆိုပါရစေ . . .